October 14, 2021 N88LeaveaComment on एसियाकै ठूलो त्रिशूल भएको पाल्पा भैरवमा दर्शनार्थी बढे
पाल्पा । यहाँका भैरवबाबाको दर्शन गर्न नेपालका मात्र नभई भारतका दर्शनार्थी पनि आउने गर्छन् । आफूले गरेका भाकल पूरा हुने जनविश्वास रहेकाले एसियाकै ठूलो त्रिशूल रहेको यस मन्दिरमा धेरै दर्शनार्थी आउने गर्दछन् । कोरोनाले सुनसानजस्तै बनेको पाल्पाको प्रसिद्ध भैरवस्थान मन्दिरमा नवरात्र सुरु भएपछि दर्शन गर्नेको चहलपहल देखिन्छ । यहाँ विशेष गरी नवरात्रको सप्तमीदेखि मन्दिरमा दर्शनार्थीको […]
केटीहरु बसाईँ हेरेर नै उनीहरु भर्जिन छन् कि छैनन् भनेर थाहा हुन्छ, कसरी थाहा पाउने? पूरा पढ्नुस्
October 14, 2021 N88LeaveaComment on केटीहरु बसाईँ हेरेर नै उनीहरु भर्जिन छन् कि छैनन् भनेर थाहा हुन्छ, कसरी थाहा पाउने? पूरा पढ्नुस्
संसार यति गोल छ, त्यसैले यहाँ हुने सबै कुराको आफ्नै महत्व छ। हामी धेरै चीजहरुको ख्याल राख्छौं र केहि चीजहरु लाई बेवास्ता गर्दछौं। हामी हाम्रो जीवन मा हरेक दिन केहि गर्दैछौं जुन हाम्रो जीवन संग सम्बन्धित छ। यदि तपाइँ तपाइँको सानो चीजहरु वा तपाइँको अर्को कार्यहरु लाई ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाइँ धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, […]
नेपाली राजनीतिमा फेरि उलटपुलट माओवादी र एमालेबीच एकता, चीनिया शक्तिकाे सक्रियता बढ्याे ?
October 14, 2021 N88LeaveaComment on नेपाली राजनीतिमा फेरि उलटपुलट माओवादी र एमालेबीच एकता, चीनिया शक्तिकाे सक्रियता बढ्याे ?
काठमाडौं । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी छन्। केही महिनाअघि मात्रै नेकपा विभाजन गरी पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा सक्रिय भएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजदूत होउले फेरि मिल्न सुझाव दिएकी हुन्। मंगलबार नेपाल डायलग फोरमले भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको छलफलमा राजदूत होउले एमाले अध्यक्ष […]
माधव नेपालले धाेका दिएपछि मेटमणी चौधरी तत्काल एमालेमा प्रवेश गर्दै !
October 14, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले धाेका दिएपछि मेटमणी चौधरी तत्काल एमालेमा प्रवेश गर्दै !
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध चर्को बोलेर चर्चामा आएका मेटमणी चौधरीले अहिले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध बोल्दै हिँडेका छन् । तीन महिना सम्म पनि मन्त्रीको सपना दखेर दंग परेका चौधरी अन्तिममा मनको लड्डु घिउ सँग खाए जस्तो मात्रै भए पछि नमज्जा सँग जिल खाएका छन् । अहिले चौधरी आफुसँग पैसा नभएका […]
प्रचण्डको भ्रममा नपर्न अपिलसहित माओवादीका दर्जनौं नेता-कार्यकर्ता एमाले प्रवेश
October 14, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डको भ्रममा नपर्न अपिलसहित माओवादीका दर्जनौं नेता-कार्यकर्ता एमाले प्रवेश
सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेतका जिल्ला कमिटी सदस्य मोहन सुनारसहित दर्जनौं नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ । एमाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका २ नम्बर वडा कमिटीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेताहरु एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा सुनारसँगै माओवादी केन्द्रबाट उपत्यका खानेपानी संस्थाको स्किम नं ७ का निर्वाचित सचिव चन्द्रपसाद न्यौपाने, हरिकला चपाई, […]
माधव नेपालले थरथरी काप्दै भने, ‘मलाई एमालेसँग डर लागिरहेको छ’
October 14, 2021 October 14, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले थरथरी काप्दै भने, ‘मलाई एमालेसँग डर लागिरहेको छ’
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूलाई एमालेसँग डर लागिरहेको तथ्य खोल्नुभएको छ । एमालेमा लामो समय एकछत्र राज गरी भविश्यवान कार्यकर्तालाई लखेटेर माओवादी जनयुद्धमा धकेल्नुभएका नेपालले एमालेबाट अलग भएपछि पनि सोही पार्टीसँग मात्रै डर रहेको मनको कुरा खोल्नुभएको हो । नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भई एमालेबाट आफ्नो पालामा कुस्त […]
October 14, 2021 N88LeaveaComment on संसद् छो’डेर जान के प्रचण्डले हामीलाई सांसद् पद बक्सिस दिएका हुन् र ? – प्रदिप ज्ञवाली
चितवन । स‌ंघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले संसद छा’डेर जान एमालेलाई प्रचण्डले बक्सिस नदिएको बताएका छन् । केही दिन अघि गृहजिल्ला आएका नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगातार रूपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेलाई संसद छा’डेर जान आग्रह गरेका थिए । दशैँको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार चितवन […]
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष मेटमणी चौधरीले कठोर कदम चाल्न लागेको खबर छ । उनले नेकपा एस पार्टी छोड्न सक्ने चर्चित राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका हुन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध चर्को बोलेर चर्चामा आएका उनले अहिले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध बोल्दै हिँडेका हु्न् । तीन महिना सम्म पनि मन्त्रीको सपना […]